नेपाल आज | मदनको हत्यारा पत्ता लगाउन निस्कृय विद्या गुटवन्दीमा सकृय !
मदनको हत्यारा पत्ता लगाउन निस्कृय विद्या गुटवन्दीमा सकृय !
जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अहिले पनि नेकपाभित्र बहसको विषय वन्ने गरेको छ । केहि दिन अघि प्रदेश १ का आफु निकट नेता/कार्यकर्ताको गोप्य भेलामा प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जबजलाई छोड्न नसकिने भन्दै व्रिफिङ्ग गरेको कुरा कार्यकारी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम्ले सार्वजनिक गरेका थिए ।
हुन पनि किन नहोस, जवजकै जगमा तत्कालिन नेकपा एमाले वन्यो। प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा जवजलाई स्वीकारेरै १० वर्ष जनयुद्धमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। तीस वर्षे पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था ढालेर राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा बाँध्ने काम पनि जवजकै जगमा सम्पन्न भएको हो ।
यति मात्र होईन, जवजको जगमा मदन भण्डारीकी पत्नि विद्यादेवी भण्डारी दोहो¥याएर मुलकको राष्ट्रपति वनिन्। उनका राजनितिक सहकर्मी केपी शर्मा ओली पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री वनिसके। तर, तिनै भण्डारीको निधन भएको २७ वर्ष वितिसक्दा पनि उनको निधनको सत्यतथ्य वाहिर आएको छैन।
देशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकार छ । सरकारको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको कुर्षिमा विद्या विराजमान छिन्। तर, भण्डारीको हत्या भएको हो वा दुर्घटनामा परी निधन भएको हो भन्ने विषय अहिले पनि अन्यौल छ।
हुन त प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको दुर्घटना नभएर हत्या भएकोमा आफू स्पष्ट रहेको बताउने गरेका छन् । आफु प्रधानमन्त्री भए हत्यारा पत्ता लगाउने भाषण गर्ने उनै ओली अहिले दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री छन्। तर, पनि उनले भण्डारीका हत्याराको खोजी सुरु गरेका छैनन्। वरु अहिले उनको भाषण फेरीन थालेको छ। घटना भएको लामो समय बितिसकेको र कठिन हुने भएपनि त्यस वारेमा अनुसन्धान हुने भन्न थालेका छन् ।
दाशढुंगा काण्डको छानबिन राम्रोसँग नभएको भनेर एमालेले त्यसवेला आन्दोलन पनि गर्यो । तर, जव त्यसै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार वन्यो तव छानविनको उच्चारण पनि नभएको पार्टीका नेताहरु नै वताउँछन् । दुई तिहाईको नेकपा सरकार, ओली प्रधानमन्त्री र भण्डारी पत्नि विद्या राष्ट्रपति हुँदा समेत मदनको हत्याराको खोजविन नहुनु आश्चार्य भएको उनीहरुको भनाई छ ।
पछिल्लो समय नेकपामा विवाद चुलिएको छ। पद हत्याउने र कुर्षि जोगाउने खेलमा ओलीसहित भण्डारीको पनि सकृयता छ। तर, आफनै पतिको हत्यारालाई खोजी गर्ने र घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने विषयमा उनले पनि चासो नदेखाएको नेताहरु वताउँछन् ।